Airlinesgbọ elu Hawaiian na-apụta n'ike site na nsogbu COVID-19
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Airlinesgbọ elu Hawaiian na-apụta n'ike site na nsogbu COVID-19
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • investments • Kamaainas • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
"Anyị na-ebili na nsogbu a ọ bụghị naanị site na nchekwube ọhụụ kamakwa dị ka ụgbọ elu ka mma, na-adigide maka ndị ọbịa anyị, ndị ọrụ anyị, na ụwa," Onye isi ụgbọ ala Hawaiian na CEO Peter Ingram dere na ozi nnabata ya nke ụlọ ọrụ a tọhapụrụ. Nkwupụta Kuleana.
Ndị ụgbọ elu Hawaiian wepụtara taa 2021 Corporate Kuleana Report na-akọwapụta ọganiru nke ụgbọelu na atụmatụ gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ọchịchị.
N'agbanyeghị na nke a bụ oge kachasị sie ike na akụkọ ntolite nke afọ 92 n'ihi ọrịa COVID-19, ụgbọ elu ahụ gara n'ihu na-elekwasị anya na ọrụ ụlọ ọrụ.
Ikwu okwu banyere mgbanwe ihu igwe bụ otu n’ime isi ụzọ ESG dị na Hawaii.
"Ka anyị na-aga n'ihu na 2021, enwere m obi ụtọ maka ihe ndị otu anyị rụzuru n'agbanyeghị oke nsogbu na agbamume maka ọdịnihu anyị," Onye isi ụgbọ elu Hawaiian Airlines Ingram gara n'ihu.
Linegbọ elu ụgbọ elu ahụ agbaala mbọ nweta 2050-carbon carbon dioxide site na 2019 site na ntinye ụgbọ mmiri na-aga n'ihu, ikuku na-aga n'ihu, mmebi carbon, na ịkwado ụlọ ọrụ maka mgbanwe njikwa ụgbọ elu na mmepe mmanụ ụgbọ elu na ụba. Bido n'afọ a, Hawaiian ekwela nkwa iwepụ ihe anwuru si na ụgbọ elu mba elu karịa ọkwa XNUMX, dịka usoro International Offgbọala Carbon Offsetting and Reduction Scheme maka International Aviation (CORSIA).
Linegbọ elu obodo Hawai'i kọwapụtakwara usoro ọ na-eme iji bulie ndịiche na nsonye, ​​na-akpọ ya "isi ihe na-eweta ọganiihu anyị." Usoro ihe akaebe na-ebelata ibelata ọrụ na ịkwalite omume na gafee Hawaii nyerela aka na ụdị ndị otu, yana ihe dịka 78% nke ndị ọrụ ya na-arụ ọrụ na-achọpụta dị iche iche dabere na agbụrụ na 44% dabere na okike.
“Anyị nwere ike ime nke ọma karịa mgbe niile, anyị na-enyochakwa omume anyị iji hụ Hawaiian ụgbọ na-anọgide ebe dị iche iche, na-etinye aka, nke ziri ezi ma na-achọsi ike ịrụ ọrụ, na ebe a na-asọpụrụ onye ọ bụla so na ya, jiri ya kpọrọ ihe ma kwado ya, "Ingram kwuru.
The 2021 Corporate Kuleana Akuko Na-edekọ otu Hawaiian - naanị onye na-ebu ụgbọ mmiri na mpaghara na otu n'ime ndị ọrụ ya kachasị ukwuu - diri nsogbu ndị ọrịa ahụ na-eweta site na ịchekwa akụnụba, ịkwado ndị ọrụ na obodo niile, na inye ụgbọ njem dị mkpa.
Na nkeji nke anọ nke 2020, Hawaiian ghọrọ ụgbọ elu ụgbọ elu US mbụ iji guzobe netwọkụ nke raara onwe ya nye site na saịtị nyocha dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ elu ya mgbe steeti Hawai'i malitere ịhapụ ndị njem site na iche iche na ihe akaebe nke ule COVID-19 na-adịghị mma. .
Akuko a siri "Anyi mere ka mmikpo oria di ike karie oru anyi niile wee were iwu mkpuchi ihu ihu na-agha dika nchekwa nke nchekwa n'ime ulo anyi, bu nke di ugbua nke oma n'ihi usoro ikuku ha na nzacha ha."
Na mgbakwunye na ijigide njem dị mkpa maka ndị njem na ibu na, site na n'ime agwaetiti n'ime ọrịa a na-efe efe, ndị ọrụ Hawaii na-esonye n'ọtụtụ mbọ enyemaka, nke mere ka ọ dị mkpa na 2020. Otu n'ime isi ihe ndị a:
Ihe karịrị ndị ọrụ afọ ofufo 1,500 nke ụgbọ elu Hawaii nyere ihe dị ka awa 6,500 maka atụmatụ nchekwa ọdịbendị na gburugburu ebe obibi, na ilekọta ndị otu na-adịghị ike na Hawaii. Linegbọ elu ahụ sonyekwara Ngalaba Mmụta nke State nke Hawai'i n'oge ọkọchị Kōkua ụlọ akwụkwọ anyị ume ọhụrụ asaa campuses tupu ndị nkụzi nabatara ụmụ akwụkwọ azụ na ọdịda ọkara afọ agụmakwụkwọ.
Ndị Hawaii rụrụ ọrụ dị omimi nke enyemaka iji fe ihe mkpuchi nde 1.6 na Honolulu site na Shenzhen, China.
Linegbọ elu ahụ kwadoro Ndị ọrụ ahụike nke Hawai'i, gụnyere ndị dọkịta, ndị nọọsụ, ndị enyemaka na ndị ọrụ afọ ofufo bụ ndị weghaara ụgbọ elu agwaetiti agbata obi ekele nke 600 na Eprel na Mee 2020 iji duzie ule COVID-19 ma nyefee nlekọta.
Ndi Hawaii nyere onyinye onu ahia $ 472,000 - site na akwa nhicha aka ohuru na ihe ndi ozo na ihe ndi ozo na ihe ndi ozo - nye ndi na-abaghi ​​uru na Hawaii na gburugburu netwọkụ US, yana ọtụtụ narị puku ngwaahịa dị nro na ihe ọkụkụ na mpaghara. òtù ndị na-ahụ maka ọdịmma mmadụ na ụlọ akwụkwọ, dị ka akwa mkpuchi isi nke Cabin, ihe mkpuchi isi na ngwa ọrụ, yana slippers nke klaasị mbụ, akwa mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ.
Hawaiian nke 2021 Corporate Kuleana Report gụnyere metrik nke Sustainability Accounting Standards Board (SASB) guzobere. Iji gụọ akụkọ ahụ ma mụtakwuo gbasara omume ESG nke Hawaii, biko gaa na https://www.hawaiianairlines.com/about-us/corporate-responsibility.
Ndị njem nlegharị anya ụwa na -emekwa ụbọchị anwụnta ụwa ...